Vintage Retro ကြီးမားသောစွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Canvas အမျိုးသမီးလက်ကိုင်အိတ် - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်မဆောင်ပါ WoopShop®
စပျစ်သီးကို Retro အကြီးစားစွမ်းဆောင်ရည်က Canvas အမျိုးသမီးများနေ့လက်ကိုင်အိတ်
$25.18 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $35.98
အရောင် အဝါနုရောင်ရှိသော ပြာသော မီးခိုးရောင် ကော်ဖီ
27x26x12cm / Beige 27x26x12cm / အပြာရောင် 27x26x12cm / Grey က 27x26x12cm / ကော်ဖီ
Vintage Retro အကြီးစားစွမ်းဆောင်ရည် Canvas အမျိုးသမီးလက်ကိုင်အိတ် - 27x26x12cm / Beige backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
အရွယ်အစား: အရှည်: 27cm, အမြင့်: 26cm, အကျယ်: 12cm ။
အလေးချိန်: 0.32kg အကြောင်း
ဝိုး !!! အစာရှောင်ခြင်းရေကြောင်း, ကောင်းတဲ့အိတ် !! A ++++++++++++
Оченьхорошаясумка, такаяинтересная။ Спасибо။
Très beau sac, tissu de qualité Livraison en3semaines မှကနေဒါတွင်ရှိသည်။
ဒါကအိတ်တစ်လုံးပါပဲ ငါအရမ်းကြိုက်တယ်! လက်ဆောင်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်